झुमी | साहित्य संगालो २०१३
Tag Archives: झुमी
कथा – झुमी
Posted on March 19, 2015 by भण्डारी2013
गितार समाएको युवकले निहुरेर लामो कपाल भित्तामा पछार्दै दर्शकलाई भन्यो, जस्ट फर यु । गितारले त्यही भाकामा भन्यो- झङ झङ झङ । स्टेजमा नाच्दै चिच्याइरहेकी युवतीले स्तन हल्लाउँदै दर्शकलाई भनी, जस्ट फर यु । गितारले त्यही भाकामा भन्यो- झङ झङ झङ । युवा जोशका केही दर्शकले उल्लासमय स्वरमा भने- जस्ट फर मी ।
छोटो हाफ पाइन्ट लगाएका दुइटी केटी एउटा केटासँग छाती जुधाउँदै अग्लो सिँडीमा नाच्न थाले । तल बःहालमा सङ्गीतको तालमा नाचिरहेका किशोरहरू तिनका नृत्य हेरेर रमाउँदै सिटी बजाउन थाले । केटीहरू झन्झन् उत्तेजित भइरहेका थिए ।
‘हाई गाइज, तपाईं मलाई बब मार्लीजस्तै देख्नुहुन्छ, होइन ? द सेम गाई हु स्यांग नो वमन नो क्राई Û’ स्टेजमा अब अर्को युवकको प्रवेश भएको थियो । किशोर दर्शक चिच्याए, ‘या.ऽ..या.ऽ..बब मार्ले, नो वमन नो क्राई ।’
‘तर म बब मार्लेले जस्तो वाइहात रिभोल्युसनको गीत गाउने छैन । सोकल्ड प्रोगे्रसिभहरूले जस्तो अधिकारको गीत गाएर पनि तपाईंहरूलाई बोर गर्ने छैन । आई विल अफर यु अ परफेक्ट इन्जोयमेन्ट ।’ उसले अघि बेस्सरि हल्लाएको कपाल टाउकाबाट झिक्यो र टेबुलमा राख्यो । अब युवकको टाउको मुडुल्लो थियो । किशोर-किशोरी खुसीले तीन हात उपि|mए । ऊ मुडुल्लो टाउको कपाल भएजस्तै गरी हल्लाउन थाल्यो । हल्लाइरहृयो, हल्लाइरहृयो ।
‘इट इज जस्ट टु मेक यु इन्जोय ।’ सङ्गीत टोलीतर्फ दुवै हात उठाएर हरिवंश आचार्यले कुनै टेलिफिल्ममा जस्तै उसले आदेश दियो, ‘म्युजिक Û’ गितार र ड्रमसेटको चर्को आवाजले टोलका घरहरू थरर्र थर्कन थाले । नेपाली बब मार्ले सङ्गीतको भोलुमलाई जित्ने गरी गाउन थाल्यो-
पल्लो घरको झ्यालमाथि एउटी सुन्दरी छे
स्याउजस्ता गाला त्यसका, हिमालजस्ता छाती
देखाउँदै मलाई भन्छे आऊ न अलि राति
रातिराति सधैँ मलाई त्यसले बोलाउँछे
किशोर-किशोरी, युवा-युवती जतिसक्दो जोडले उप|mँदै नाच्न थाले । यो खेलमा केही अध्बैँसे पनि संलग्न थिए । ती सकेसम्म किशोरीका हूलमा कोचिएर उप|mन्थे र छिनमै घचेटिएर छेउमा पुग्थे । किशोरीका हूलमा पुग्न त स्वयं किशोर र युवाहरू नै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्थे । कतिसम्म भने अनौपचारिक सम्झौताजस्तै हलक्क बढेका किशोरहरू परिपक्व युवतीका हूलमा अनि जिम गरेर पहलमानको जस्तो छाती बनाएका युवकहरू किशोरीको हुलमा पुग्थे र तिनीहरूका पेट र कम्मरमा हात राखेर नाचिदिन्थे । हात त्यहीँ बसिरहनुपर्ने कुनै बाध्यकारी संविधान थिएन । अतः त्यो आरोही जस्तै निरन्तर माथिमाथि सर्दै छातीतिर सल्बलाउन थाल्थ्यो ।
यो सह-नृत्यमा किशोर र युवाहरू मात्र अघि बढ्थे भन्नु महिलाजनप्रति अलि अन्याय हुन्थ्यो । किशोरी र युवती पनि त्यतिकै स्वतन्त्रतापूर्वक पुरुषको हूलमा पाइला अघि बढाउँथे र कम्मर थमाउँथे । सत्य कतिसम्म थियो भने पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या तद्बेसिक कम थियो ।
रातको एघार बजे, चर्को सङ्गीत, चर्को स्वर र निमेषमै फेरिरहने बत्तीका विविध रङहरू ।
‘ऊ त्यो मिनीस्कर्टवालीलाई चिन्छस् ?’
‘त्यसको स्कर्ट यही तालले छोटिँदै जाने हो भने प|mकको तल्लो फेर नै त्यसको कम्मरमा पुग्छ यार ।’
‘ए त्यो श्रेया ? त्यल्लाई त अस्ति शुभकामना प्यालेसमा किस्नेले……Û’
‘त्यसको नाम शैया राखिदिऊँ । त्यसो गरे कसो होला ?’
देशमा सङ्गीतले कति क्रान्तिकारी मोड लिएको थियो भने अब यो श्रव्यबाट एकाएक दृश्यमा परिणत भएको थियो । त्यसमा गायक र सङ्गीतकार नै सङ्गीतको शव काँधमा बोकेर हिँडेका देखिन्थे । तिनलाई आˆनै गीतका रचनाकार को हो थाहा हुन्नथ्यो । तथापि, देशका केही कवि कविताकर्म छाडेर गीत नै सबथोक हो भन्दै नियमितरूपमा गायक-सङ्गीतकारको दैलो पोत्न थालेका थिए । उता, दर्शकलाई चाहिँ गीतमा अभिनय गर्ने रहरलाग्दा मोडलबाहेक सङ्गीतकार र गायककैसमेत वास्ता हुन छाडेको थियो ।
यो त प्रत्यक्ष कार्यक्रम नै थियो, जसमा गायक-गायिका नै मोडलको रूपमा देखा पर्थे ।
मञ्चमा अर्को टोली प्रवेश गरेको थियो । यो केही केटीको समूह थियो । त्यसमा नृत्य गर्न एउटा केटा पनि मञ्चमा उत्रियो । हाफ पाइन्ट र टाँक नलगाएको सर्टका तल्ला दुई फेर पेटनिर बाँधेकी केटी माइक समातेर अघि बढी ।
‘हाई गाइज, नाउ आई एम गोइङ टु प्रेजेन्ट लाइक अ भर्जिन बाई मेडोना, ओ के ?’
‘हाई गर्ल, आर यु अ भर्जिन ?’
‘ह्वाट डु यु थिंक ?’
‘नट बट जस्ट लाइक अ भर्जिन ।’
‘यु नटी, भेरी भेरी नटी ब्वायज । या…ऽ………।’
गितार र ड्रम सेटको चर्काे आवाजसँगै माइक समातेकी गायिका र जगल्टे युवकको नृत्य सुरु भयो । युवकहरूलाई यो निकै जोश दिने खालको थियो । केही युवक जबरजस्ती मञ्चमा छिर्न खोजे । सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा थियो । यस कारण ती तलै बसेर उप|mन बाध्य भए । केटीले आफूलाई केटाको अँगालोमा छाडिदिई र आकाशतिर च्युँडो फर्काई । केटाले च्युँडोमा चुम्बन दियो । दर्शक तीन हात उप|mेर नाच्न थाले । यस्तो लाग्थ्यो, केटीले मेडोनाको गीतलाई पनि रिमिक्स गरिदिएकी थिई । पेटको लाम्टै बाहिर निकालुँलाझैँ गरी ऊ गाउन थाली ।
लाइक अ भर्जिन
फिल सो गुड इनसाइड
आ’हाभ नथिङ टु हाइड………………………………..
दिस इज अ आँपको दाना इट इज अ पाकेको
आइ एमको लर्के जोवन यु आरलाई साँचेको
दिस इज अ आँपको दाना…
मेडोनाको गीत सकिँदा नसकिँदै कथामा टेलपिसजस्तै उसले जीवन्त नृत्यसहित अर्को पपगीत गाई जुन रेडियोमा केटाको स्वरमा सुनिन्थ्यो । गीतमा उसले लंैगिक शब्द मिलाएकी थिई र पाकेको आँपको दानारूपी आफ्नो शरीर कसैका लागि साँचेको इशारा गरेकी थिई ।
दर्शकको उत्तेजनालाई बीचमै रोकेर ऊ मञ्चको पछिल्लो भागबाट तल ओर्ली जहाँ कुनै टेलिभिजन संवाददाता र क्यामेराम्यान उसलाई पासो थापिरहेका थिए ।
‘यु लुक सो स्मार्ट एन्ड सेक्सी ‘
‘थ्याङ्क यु, सबै जना यसै भन्छन् ।’
‘ब्वायप|mेन्ड्स कति छन् ?’
‘डु यु वान्ट टु बी वन अफ देम ?’
‘म्युजिक के हो ?’
‘ह्वीच मेक्स यु इन्टरटेन ।’
‘गायिका हुन केके आवश्यक छन् ?’
‘सेक्स अपिल । ह्याभ यु गन क्रेजी ? आइ एम प|mांकली स्पिकिङ ।’
‘मनपर्ने गायक ?’
‘द ह्यान्डसम ओल्डी जर्ज माइकल हु सिंग्स आइ वान्ट योर सेक्स ।’
‘मनपर्ने नायक ?’
‘उम् माइ ह्यान्डसम ब्राड पिट । आइ एम जेलस टु हलिवुड साइरेन एन्जेलिना जोली हु सिज्ड हिम ।’
‘तपाइँ मेसोकिस्ट हो ?’
‘तपाइँ स्याडिस्ट हो ? एनी वे, यु क्यान एक्सपिरिएन्स योरसेल्फ ।’
‘ह्याभ यु गट म्यारिड ?’
‘देयर इज अ भ्याकान्सी । यु क्यान अप्लाई ।’
‘राति सुत्दा कस्तो लुगा लगाउनुहुन्छ ?’
‘नटी ब्वाय, नो एन्सर ।’
‘जस्ट गिभ सर्ट एन्सर्स । तपाइँको गीतमा र्‍याप हुन्छ कि रेप हुन्छ ?’
‘रेप नै हुन्छ । तपाइँ यही चाहनुहुन्छ, हैन ?’
‘म्यारिज के हो ?’
‘एभ्री भर्जिन इम्प्यासेन्टली वेट्स फर एन्ड एभ्री स्पाउज वान्ट्स टु बी अवे प|mम ।’
‘धत्…। हे..हे..सो फार, जस्ट फाइभ चान्सेज ।’
‘आइ जस्ट मिन योर जेन्डर
‘ओ, शिट डु यु थिङ्क एम आई थर्ड सेक्स ?’
मञ्चमा फेरि अघिकै ‘बब मार्ले’ र अघिकै केटी ओर्लिए । केटालाई अघिकै गीत गाउन आग्रह गरियो । उसले फेरि गायो-
बारुले छ कम्मर उसको, तर छाती फुक्का
उसलाई देखेपछि मन किन हुन्छ हुक्क
दुई टुक्रा प्याजजस्ता उसका दुई पाता
भुतुक्कै पारिहाल्ने कस्तो उसको जात
रामतोरियाँ उसका औँला, पिँडुलाचाहिँ थाम
मन कसरी थाम्नु मैले हरे राम राम
दर्शकको भीड अब निकै उत्तेजित थियो । तिनीहरू फेरि मञ्चमा उक्लिन खोजे । बाउन्सरहरूले फेरि तिनलाई रोके । प्रहरीले पनि बाउन्सरलाई सहयोग गर्‍यो । बत्तीको प्रकाश झिपिकझिपिक भइरहेको थियो ।
एउटा सङ्गीत टोली जबरजस्ती स्टेजमा गयो । ‘डियर अडेन्स, यहाँ हामीविरुद्ध षडयन्त्र हुँदैछ । हामीलाई गाउन नदिने षडयन्त्र हुँदैछ । आर यु विद अस ?’
‘देन प्लीज बी एट वसन्तपुर । वी विल पर्फम देयर ।’ बाउन्सर र प्रहरीले तिनीहरूलाई मञ्चबाट ओराले । तल गएर पनि तिनीहरूले दर्शकलाई वसन्तपुरमा आउन आग्रह गरे ।
केही दर्शक वसन्तपुर जान तयार भए । केहीले मुर्दावादका नारा लगाए । मञ्चमा नाचिरहेकी केटीले माइक समाएर दर्शकलाई आग्रह गरी । ‘डियर अडेन्स, वी विल पर्फम जस्ट फर यु अगेन ।’
दर्शकका पाइला अडिए र वसन्तरपुरतिर लागेका दर्शक पनि फर्की-फर्की आए । अघिको गीत ब्रेक भएको थियो । फेरि नयाँ सङ्गीत बज्न थाल्यो ।
केटाले दर्शकतिर हेरेर भन्यो, जस्ट फर यु ।
केटीले दर्शकतिर हेरेर भनी, जस्ट फर यु ।
केटाले अघिजस्तै कपाल भित्तामा पछार्दै घुमायो । केटीले त्यस्तै गरी । केटाले अघिजस्तै कपाल फुकालेर टेबुलमा राख्यो । केटीको कपाल नक्कली थिएन । यसकारण उसले साइबाबाको लकेट फुकालेर टेबुलमा राखी । केटाले सर्ट फुकालेर फालिदियो । केटीले पनि टिसर्ट फुकालेर फालिदिई । अब केटा भेस्ट र केटी चेस्टरमा मात्र थिए । केटाले भेस्ट पनि फुकालेर फालिदियो । केटीलाई आपत् पर्‍यो । ऊ त्यहाँ चेस्टर फ्याँक्न सक्दिनथी । दर्शकको एउटा तप्काले उसलाई चेस्टर फ्याँक्न आग्रह गर्‍यो । उसले प्यान्टबाट बेल्ट मिल्काएर फालिदिई । केटाले छाती हल्लाएर भन्यो, तपाईंहरूकै लागि । केटीले स्तन हल्लाएर भनी, तपाई्रहरूकै लागि ।
केटाले प्यान्ट पनि फुकालेर फालिदियो र भन्यो, तपाईंहरूकै लागि । केटी प्यान्ट फुकालेर पनि फाल्न सक्दिनँथी । ऊ अकमक्क परी । दर्शकले उसलाई प्यान्ट फुकालेर फाल्न आग्रह गरे । उसले हिन्दी सिनेमाकी कुनै हिरोइनले जस्तै पाइन्टको बटन खोली र जिपर खोलिदिई । त्यसपछि दुइटा हात आफ्ना दुई स्तनमा राखेर चारैतिर घुमी । त्यसपछि पाइन्टको बटन र जिपर लगाई । फेरि बेल्ट र टिसर्ट लगाई । केटाले पनि क्रमशः लुगा लगायो । अब सङ्गीत सुरु भयो । उनीहरू गाउन थाले, जस्ट फर यु । जस्ट फर यु । केटाले कपाल घुमायो । केटीले पनि त्यसै गरी । केटाले कपाल फुकाल्यो । केटीले लकेट फुकाली । केटाले टिसर्ट फुकाल्यो । केटीले पनि टिसर्ट फुकाली । सङ्गीतको एकोहोरो उँचो आवाज घन्किरहेकै थियो । दर्शक उप|mीउप|mी नाचिरहेका थिए ।
‘ए के भो ? के भो ?’
‘खै, के भएको हो ? केटीहरू रगतपच्छे भएर लडिरहेका छन् ।’
हेर्दाहेर्दै सिँडीमा उभिइरहेका दुई युवती सोत्राम भएर तल बःहालमा ढलेका थिए । तिनीहरूलाई छुरी हानिएको थियो । सङ्गीतको भोलम झन्झन् चर्किरहेको थियो । केही मानिस ढलेका केटीहरूलाई घेेरिरहेका थिए । तिनकै अगाडि ठिटाठिटी अनियन्त्रित भएर नाचिरहेका थिए । अगाडिबाट कसैले घचेट्यो । नाचिरहेका एक हूल किशोरकिशोरी ढलेका केटी र तिनीहरूलाई घेरिरहेका मान्छेमाथि गर्लम्म ढले ।
‘छुरा हान्ने त्यै झगडिया मुन्द्रे होइन ?’
‘खै कहाँ छ साले ?’
‘अपराधी बसिर’न्छ ?’
‘केटीहरू पनि बैँसले उम्लेकै हुन् है, नत्र यस्तो हुन्थ्यो ?’
‘होइन, के भएछ ?’
‘ठिटाले ठिटीको छाती समाइदे’छ ।’
‘अनि के ? दुइटी ठिटी मिलेर चप्पल हाने । केटो लुरुक्क परेर हिँड्यो । एकैछिनपछि कुन सड्कोमा आएर दुवैलाई छुरी रोपेर टाप कस्यो ।’
‘समाउनु पर्दैनथ्यो ?’
‘छुरी बोकेको मान्छेलाई कसले समाउने ?’
‘थुक्क, यत्रा मान्छे भएर..।’
‘च.च..च..विचरी केटीहरू अस्पताल लानु पर्दैन ?’
‘लगेर कामै छैन, थिचिएरै मरिसके ।’
‘भनेर हुन्छ ? यत्रा मान्छे भएर यिनीहरू मरेको टुलुटुलु हेरिरहने ?’
‘क्या च्वाँक थे, मर्ने भए यार ‘
‘वा फेरि….., हुर्रे
‘ऊ…..या…….जस्ट फर यु । जस्ट फर यु ।’
‘हुइऽया…जस्ट फर यु । जस्ट फर यु ।’ -कोरस) ।
भीड पागल भएर नाचिरहृयो । झन्झन् नाचिरहृयो किनभने मञ्चमा केटाले फेरि पाइन्ट फालिदिएको थियो । केटीले फेरि पाइन्टको बटन खोलिदिएकी थिई । च
Posted in Nepali Stories	| Tagged कथा, झुमी, नेपाली साहित्य	| Leaveareply